နေထိုင်မှုပုံစံ Archives - Page7of9- My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Safety at work measures
“လုပ်ငန်းခွင် လုံခြုံမှု” လုပ်ငန်းခွင် လုံခြုံမှူဆိုတာ ဘယ်လို လုပ်ငန်းခွင်အတွက်မဆို ရှေ့ဆုံးမှာထား စဉ်းစားသင့်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်…. လုံခြုံမှူ မရှိတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဟာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှူနဲ့ အကျိူးအမြတ်ပေးနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင် မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်… အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ ဆိုရင်…. အလုပ်သမား တွေကို…
အပူဒဏ်နှင့်ချွေးထွက်များခြင်းကို ဒီလိုကာကွယ်ကြရအောင် ယနေ့အချိန်တွင် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာသည်နှင့် အမျှ ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အပူဒဏ်ကို အနည်းနှင့် အများ ခံစားကြရပေသည်။ အများအားဖြင့် နေပူထဲတွင် အလုပ်လုပ်သောသူများ၊ ကလေးများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် အပူဒဏ်ကို ပို၍ခံစားကြရသည်။ အပူဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်သော ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို မဖြစ်စေဖို့ အပူဒဏ်ကို…
နားထဲ ရေဝင်လျှင် သင်္ကြန်လည်း နီးလာပြီမို့ နားထဲရေဝင်လျှင် ရေထွက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ် နားထဲရေဝင်ခြင်းခံစားရလျှင် ခံစားရသူလည်း အနေရခက်လှသည်၊ နားတွင်း နာခြင်း၊ နားအူခြင်းများ ရေဝင်ခြင်း ခံစားရတတ်သည်၊ ရေမထုတ်ဘဲထားလျှင် နားစည်ယောင်ခြင်း၊ နားလေးခြင်း ၊ အခြားသော…
ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာ သတိထားရမယ့် (အပူလျှပ်ခြင်း) အခုလို ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်က 104 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (သို့မဟုတ်) 40 ဒီဂရီဆဲစီးရပ် ထက်ကျော်သွားရင် Heatstroke ရတတ်ပါတယ်။ *ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ အလွန်ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတု၊ နေရောင်ခြည်နဲ့ အချိန်အကြာကြီး ထိတွေ့မိခြင်း (သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့…
နွေရာသီမှာ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် အချက်(၈)ချက် ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီကို ရောက်လာတဲ့အခါ နေကပူ၊ချွေးကထွက်နဲ့ စိတ်တွေကမကြည်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ အပူချိန်မြင့်မားလို့ဖြစ်တတ်တဲ့ နေလောင်ခြင်း ချွေးထွက်လွန်ခြင်း ဗိုက်တွေ ခြေသလုံးကြွက်သားတွေနာကျင်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊မူးဝေခြင်း နွမ်းနယ်လာခြင်းဝေဒနာတွေ (Heat Exhaustion)နဲ့ အပူလျှပ်ခြင်း (Heat Stroke) တို့ရဲ့အန္တရာယ်ကလည်း ကြောက်ရပါသေးတယ်။…
လက္ျပင္ငုတ္ျခင္းဆိုေသာ မသာမယာျပႆနာ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ ညအိပ္တုန္းထိအေကာင္း။ မနက္မိုးလင္းလာေတာ့ လက္ေမာင္းက လႈပ္လိုက္တိုင္းနာေနတာမ်ိဳး။ နားလိုက္ေပမယ့္ တစ္ႏုံႏံုနာေနတာမ်ိဳး ။ ဒါဆို လက္ျပင္ငုတ္တယ္ဆိုတာဘာလဲ? အဓိကကေတာ့ လက္ေမာင္းရိုးအဆစ္ ( Shoulder Joint) ထဲမွာ ေယာင္ယမ္းျခင္းျဖစ္ေပၚၿပီး ဒီလို လႈပ္လိုက္တိုင္း သို႔…
ရယ်မောပါ။ တစ်ချက်ပြုံးရင် တစ်ရက်အသက်ရှည်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့လူတွေချည်းရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်တွေအခက်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကိုအံ့ဩစရာပြောင်းလဲစေတဲ့ မှော်စွမ်းအင်တစ်ခုဖြစ်လို့ပါ။ ကျွန်မတို့ပျော်ရွှင်ခြင်းအကြောင်း ဘယ်လောက်သိထားပါသလဲ? ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာ နှလုံးအတွက်ဆေးတစ်ခွက်ပါ။ ရယ်မောပျော်ရွှင်ခြင်းဟာ စိတ်လက်ပေါ့ပါးစေတာကြောင့် သွေးပေါင်ကျစေတယ်။ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်တာကို နှေးစေတယ်။ ဒီလိုနည်းတွေနဲ့နှလုံးကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေပါတယ်။ မကြာခဏ အအေးမိဖျားနာတတ်သူတွေဟာ…
ပျားရည်စမ်းခရီးအတွက် ပြင်ဆင်ပြီးကြပြီလား? မင်္ဂလာဆောင်မယ့် မောင်နှံတွေအတွက် ပျားရည်စမ်းခရီးဆိုတာ မပါမဖြစ်ပေါ့နော်။ တစ်သက်မှာ တစ်ခါ နှစ်ယောက်တည်းချစ်စ ခင်စမှာ အတူတူသွားရတဲ့ ခရီးမို့ ကြည်နူးစရာအမှတ်တရတွေ ပြည့်နေဖို့ကလည်း အရေးကြီးလှတာပေါ့။ ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း စိတ်ချမ်းသာစရာတွေနဲ့ ပြည့်နေဖို့ဆိုတာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုသလို၊ နေရာရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ဖို့လည်း အဓိကပဲနော်။…
“ခရီးသွားရင် အပြည့်အဝပျော်ရဖို့” ခရီးသွားနေချိန် ကျန်းမာရေးပြသနာတစ်စုံတစ်ရာပေါပေါက်လာရင် အပြည့်အဝမပျော်နိုင်တော့ပါဘူး။ပိုဆိုးတာက အနီးအနားမှာ ဆေးရုံဆေးခန်းဆေးဆိုင်တွေပါ မရှိဘူးဆိုရင်ပိုဒုက္ခရောက်ရပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း မိသားစုတွေ သူငယ်ချင်းအုပ်စုတွေ couple လေးတွေ စသဖြင့် လူအတော်များများ ခရီးတိုတွေ ခရီးရှည်တွေ မကြာခဏဆိုသလို အသွားများလာတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ မကြာခင်မှာလည်း ရုံးပိတ်ရက်ရှည်တွေ ရောက်လာတော့မှာမို့…